Madaxweyne Michel Kafando Oo Xukunka Burkina Faso Dib Ugu Noqday | Qodaal News
Madaxweyne Michel Kafando Oo Xukunka Burkina Faso Dib Ugu Noqday
Michel Kafando, madaxweynaha ku meelgaadhka ah ee dalkaBurkina Faso, ayaa sheegay in xilka dib loogu wareejiyay kadib afgambigii todobaadkii tagay Ciidamadu madaxtooyada ku haysteen awoodda dalka.
Madaxweynaha oo Arbacada maanta hadal kooban ku siiyay saxaafadda wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi ayaa sheegay in xiliga kala guurka awoodeed dhacday haddana uu awoodda dalka gacanta ku hayo “Waxaan ku noqday shaqada. Wakhtiganna waxaan gacanta ku hayaa awoodda dalka,” ayuu yidhi madaxweyne Kafando.
Arrintan ayaa timid wada hadalo hoggaamiyeyaasha wadamada galbeedka Africa wadeen oo Nigeria ka dhacay, kuwaasi oo hogaamiyeyaasha afgambiga sameeyay ku cadaadiyay inay hogaanka dalka ku celiyaan dawladda rayidka ah.
Hogaamiyeyaasha madaxweynaha iyo ra’isal wasaaraha afgambiyay islamarkaana ka dhigay la haysteyaal ayaa loo damaanad qaaday in aan wax dhibaato ah loo gaysan, sidaasna ay dib ugu noqdaan fadhiisimadooda, iyagoo la filayo inay maanta ku noqdaan fadhiisinkooda oo ka fog caasimada.
Habeenkii Salaasada ayey hoggaamiyayaasha afgambiga todobaadkii tagay la saxiixdeen heshiis nabadeed ciidamada rasmigaa.
Heshiiska ayey xubnaha ilaalada madaxtooyada ee afgambiga ka dambeeyay aqbaleen inay ku laabtaan fadhiisimadooda, halka ay ciidamaduna ka baxayaan 50 kiilomitir magaalada xarunta ah ee Ouagadougou.
Dhowr ka mid ah hoggaamiyayaasha Afrika ayaa yimid Burkina Faso si ay ula socdaan xil wareejinta